ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ဘကြီးပြောပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့် သိကောင်းစရာများ-အပိုင်း(၃)
Posted by aye.kk on Nov 9, 2012 in My Dear Diary | 22 comments
၄။ စကားပြောသည့်အခါ သွားဖုံးများ ပေါ်နေသည့်သူ
သွားဖုံးပေါ်သည်ဟုဆိုရာတွင် အားရပါးရ ရယ်မောလိုက်လျှင် သော်၎င်း ။ သာမာန်ရယ်မောမျှရုံ မျှဖြင့်ပေါ်လွင်သွားသော သွားဖုံးပေါ်မှုအား ဆိုလိုခြင်း(လုံးဝ)မဟုတ်ပါ ။ စကားပြောခါမျှဖြင့် သွားနှင့်သွားဖုံးများ ထိစပ်ပေါ်လွင်နေမှုအား ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့ ရသည့်သူ ။
(၀ါ) သွားဖုံးများအောက်ဘက်သို့ နိမ့်ကျဆင်းလျှက် စကားပြောသည့်အခါမျိုး၌ သွားနှင့်သွားဖုံးထိစပ်ပေါ်နေမှုအားတွေ့ မြင်ရမှု ။ သတိထားလျှင် သိမြင်နိုင်သည့် အကြောင်း ဘကြီးပြောပြထားပါတယ်။
(အသေးစိတ်ရှင်းပြရပါလျှင် သွားနှင့်ထိစပ်နေသည့် သွားဖုံးနေရာသည် နှာခေါင်းအပြင်ဖက်ခြမ်းရှိ နှုတ်ခမ်းသားတို့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားလျှက်ရှိသည့်နေရာ။ ပညတ်အားဖြင့် သွားဖုံးဟု ခေါ်ဆိုသမှုပြုသော နေရာ ။
တနည်းအားဖြင့် ဆိုရပါက ထိုသွားနှင့်သွားဖုံးတို့ထိစပ်လျှက်ရှိနေသော အကာကွယ်ရှိနေသည့် နေရာကား ။ စကားပြောရုံ တော်ရုံရယ်ပြကာမျှဖြင့် မမြင်မတွေ့ နိုင်ပါ ။ စကားပြောသည့်အခါ အာခံတွင်းမြင်နေရမှုအား ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ ။ ထိုသို့ ထူးခြားလာကာ မွေးရာပါ
သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်တည်လာသော ရုပ်လက္ခဏာ ရှိသည့်အနှီထိုမိန်းကလေး၏
စိတ်သဘောထားကို သာလျှင်ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်)
အနှီမိန်းကလေးများ၏စိတ်ကား ဟန်ဆောင်မှုကောင်းသည့်မိန်းကလေးများဖြစ်နေခြင်း ။
စိတ်သဘောထားအမှန်အား မည်သည့်အခါမျှထုတ်ဖော်ပြသလေ့မရှိခြင်း ။
လျှာဖြားကလူတကာပေါ်တွင်၊ စိတ်ချမ်းသာလောက်အောင်၊ ပျားသကာကဲ့သို့ ချိုမြနေအောင်၊ပြောဆိုတတ်ပြီး။
စိတ်အတွင်းသဘောနှင့်အပြင်သဘောတို့ က ဆန့် ကျင်နေခြင်း ။ မာယာမုသားစကားများဖြင့်သာပြောဆိုသုံးနှုံးလေ့ရှိခြင်း။
ဘယ်သောအခါမှာမျှ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မပြုနိုင်သဖြင့်။ အနှီထိုမိန်းကလေးများအား ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုလုပ်ရန်။
ကျီးအာသီးနှင့်တူသောသူများဟု။ ဘကြီးကတင်စား ပြောဆိုပြသ ။ ဆုံးမသွန်သင်ထားဘူးပါသည် ။
ကျီးအာသီးကအပြင်ဘန်းတအားလှပြီး စား၍ကားမရ ။ စားမိလျှင်အဆိတ်သီးဖြစ်၍ ။ လူကိုဘေးဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပြီး အသက်ပင်ဆုံးရှုံးရသည့်အထိ အန္တရာယ်ကြီးမားစွာ ကြုံတွေ့ နိုင်ရကြောင်းပြောပြပါတယ်။
အနှီထိုမိန်းကလေးများအား ယခုခေတ်၌အများအပြားတွေ့ ရှိနေရပါတယ်။
ကျမ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကောင်း ။ မိတ်ဆွေသားသ္မီးအချို့မိန်းကလေးများတို့ တွင်၎င်း။ တွေ့ ကြုံဆုံစည်းဆက်ဆံမှုများ မလွှဲသာ၍ပြုလုပ်ခဲ့ရမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ဆက်ဆံ ပြုလုပ်ခဲ့ရမှုများအပေါ် သတိတရားထားရှိ ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ မှန်ကန်မှုရှိနေသည်ကိုလည်း အမြဲတန်းမြင်တွေ့ နေခဲ့ပါတယ်။
အနှီထိုမိန်းကလေးများကား၊ မိမိတို့ ရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းစေတနာဆိုးများအား ၊ အမြဲတန်းလျို့ ဝှက်ဖုံးကွယ်သည့် လူစားများသာဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ရေး တို့ တွင် ၊ များသောအားဖြင့် သာယာမှုမရှိကြပဲ မမြဲတာကိုလည်း တွေ့ ရတာများပြားလှပါတယ်။
အချို့ မိန်းကလေးများ ရုပ်ရည်ချောမောကြသော်လည်း စကားပြောသည့်အခါတွင် သွားဖုံးများပေါ်နေသည်ကို မြင်ရပါလျှင် ကျီးအာသီးနှင့်တူသည့်သူဟု ဘကြီးကပြောပြထားသည်ကို ချက်ခြင်းစိတ်က သတိတမ်းရတတ်ပါတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ ဆက်ဆံရသည့် အခါများ၌လည်း ကျမ၏စိတ်က ကျောခြမ်းပြီးကြက်သီး ထမိပါတယ်။ လူ့ ပတ်ဝန်းကျင်၌ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ကြုံတွေ့ ဆက်ဆံရမည်မှာကား ဓမ္မတာပေ။ သို့ သော် သိထားလျှင်ကား ထိုအနှီမိန်းကလေးတို့ နှင့် မလွဲရှောင်သာ ဆက်ဆံရပါက ဆင်ခြင်တုံတရား သတိထားရှိနိုင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘကြီးပြောပြထားသဖြင့် လွန်စွာကျေးဇူး ရှိသည်ကို သိမြင်မိပါတယ်။
ထိုအနှီမိန်းကလေး များ၏စကားများကား ယုံနိုင်ဘွယ်ရာ မရှိသည်ကိုသာ များသောအားဖြင့် မြင်တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
အသက်အစိတ်ခန့် မျှ ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးအား မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မိတ်ဆက်ပေးရင်း သိခဲ့တာပါ ။ ထိုမိန်းခလေးက ရုပ်ရည်ချောမောပါတယ် ။ စကားပြော ကြည့်တော့ သွားဖုံးများပေါ်နေတာကို တွေ့ ရလို့ စိတ်ကတော့လန့် မိပါတယ် ။ မကြာပါဘူး မိတ်ဆွေက မိတ်ဆက်ပေးထားတော့ သူ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ကျမကိုချည်းကပ်သမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကိစ္စမရှိတာမို့ကိုယ်ကအကူအညီ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်တဆင့် တက်လာတာက ကိုယ့်နဲ့ သိရတဲ့အပေါ်မှာ အခွင့်အရေး တခုလိုမှီတွယ်လာတာပါ ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးမှုအပေါ် ကျေးဇူးတရား တုံ့ ပြန်ချင်လာတော့ ညာတော့တာပါ ။ သူ့ စကားပလီပလာ ကိုယ်ကသိထားတော့ ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းမြိုသိတ်ထားမိ ရတော့တာပါဘဲ။ သူကနိုင်ငံခြားမှာ အနေများတော့ ပစ္စည်းတန်ဘိုးမြင့်မားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အချို့ ကို မမြင်ဘူး မကိုင်ဘူး နားလည်မယ် မထင်ဘူးလို့ ယူဆထားဟန် တူပါတယ် ။ အတုအစစ်ခွဲခြားတတ်မယ် မထင်ထားတာလည်း ပါမယ်လို့ စိတ်ကထင်မိပါတယ် ။ တစ်ခါကမိကျောင်းသားရေ အစစ်လို့ ပြောပြီး။ သားရေအစစ်ရဲ့ တန်ဘိုးနဲ့ ညီမျှတဲ့ငွေ ပေးပြီးဝယ်လာတာလို့ ပြောပြီး မိကျောင်းသားရေတံဆိတ်အတု လက်ကိုင်ပိုက်ဆံအိတ် တစ်လုံးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပါတယ် ။ သူကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားမှာ ဈေးဆိုင်ခန်းဖွင့်ပြီး ဈေးရောင်းစားနေတာ ဆိုတော့အတုအစစ် မသိစရာ အကြောင်းရှိမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မထင်ပါဘူး။
ကျမကို နားလည်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပြီးချိုသာတဲ့ မာယာတွေနဲ့ မုသားတွေ သုံးပြီး ။ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ ။
နောက်ထပ်သူ့ ကို ကူညီမှုတွေ ထပ်မံပေးချင် လာအောင်လက်ဆောင် ပေးပြီးသိမ်းသွင်း လိုတဲ့သူ့ ရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ စေတနာတွေကို မြင်သိခဲ့ရလို့ ပါဘဲ။ တတ်လည်းတတ်နိုင်ပါတဲ့ မယ်မင်းကြီးမ မိန်းခလေးရေ လို့ သာ ကျမက ဆိုချင်မိတော့တာပါ ။။
ရှေ့တမျိုး ကွယ်ရာတမျိုး စကားပလီပလာ ချိုကာမာယာမုသား နှုတ်ဖျားသုံးပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖျား ပြောဆိုတတ်သည့် (စကားပြောလျှင်သွားဖုံးများပေါ်နေသည့်)မိန်းခလေးများအချို့ အား ကိုယ်တိုင်မျက်မြင် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရမှုများအပေါ် ဗဟုသုတ အဖြစ်ရရှိ်နိုင်ပါရန် ပြောပြချင်မိခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။။
ကျွန်တော်လဲ စာရေးသူထက်နောက်ကျပြီးမှ မန့်ဖြစ်တာ အားနာမိကြောင်းပြောပြပါရစေလေ..
သွားဖုံး… မိန်းကလေးတွေရယ်ကြတယ်..(ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်အမြင်နဲ့ပေ့ါနော်.. မတူသောအတွေးနဲ့မန့်တာ) တစ်ချို့တွေ ပါးစပ်လေးကိုဖုံး ရယ်ကြတယ်.. တစ်ချို့က ပွင့်ပွင့်လင်း အားပါးတရ ဘူး.. ထွား.. ဟွား.. ဟွား လို့ရယ်ကြတယ်.. ဒီတော့မမြင်သင့်တာတွေ ပေါ်ကုန်တယ်ပေါ့.. (သွားတွေ ဘာတွေပြောပါတယ်).. တစ်ချို့ကလဲ စိတ်လိုလက်ရ အားပါးတရ ရယ်ကြတယ်… အာသီးတောင် လှမ်းမြင်ရသေးတယ်.. ဂလို ဂလို..
အဲလိုဆိုတော့ သွားဖုံးပေါ်ရင် အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့နော်… ဆိုင်တော့ ဆိုင်ဘူးထင်တယ်… ဂလိုဆို ခေါစုခင် (မှားလို့) ချောစုခင်ဆို အဲလိုမိန်းမလား??? ဟုတ်သေးဘူးနော်… သူက ဒိုးပြားသေမှ နောက်ယောက်ကျားယူတာ… ထားဘာဒေါ့..
သွားကို ရှေ့ထုတ်ပြီး အဖီမိုးထားတဲ့ မိန်းကလေးများ သတိထားပါကုန်.. အထက်ပါပုဒ်မဖြင့် ယောကျာ်းမရပဲ ဖြစ်ကုန်မယ်…
တီကေရေးတာတွေ စောင့်နေတာ ဖတ်ဖို့
ကိုရှုံးရေးတာဖတ်ပြီး ရယ်နေရတာ…သူပြောတော့လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်…
အခုထက်ထိတော့ တီကေရေးတဲ့မိန်းကလေးမျိုးထဲ မပါသေးပါဘူး…
နောက်လည်း ပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀အရွယ်ထဲက မိတ်ဆွေဘကြီးက
သင်ပေးခဲ့တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာ အကြောင်းတွေပေါ့နော် ။
အခုချိန်အထိ အန်တီအတွက်က အသုံးဝင်နေဆဲပါကွယ်။
အရှေ့ ပိုင်းတွေလဲ ဖတ်ခဲ့တယ်
အတော်များများ မှန်လို့ ပါ
နောက်ထပ် post များကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ် ……..
အဲ့လို မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ ဆုံခဲ့ဘူးတာကြောင့်
မျက်ကွယ်မတော့ မကောင်းပြောတာ ပြန်ကြားခဲ့ရပါတယ်…
နောက်ထပ် အကြောင်းရာလေးတွေလဲ စောင့်ဖတ်ပါဦးမယ်နော်…
အမရေ..candle့ဦးလေးအရင်းခေါက်ခေါက်က ယူထားတဲ့ အမျိုးသမီး ( အဒေါ် ) က အဲ့လိုသဖုံးမျိုးနဲ့ ပါ ကာရိုက်တာ ကလည်း အမပြောသလို 95% ကကွက်တိ တစ်မျိုးလုံးကသူ့ ဆိုခပ်လန့် လန့် ….
အန်တီအေး မတွေ့တာကြာပြီ။ နေကောင်းရဲ့လား။ နောက်ဆက်ရန်တွေ မျှော်နေပါတယ်။
ရှောင်မှ ဖစ်မယ် …
အိုက်အထက်က အမျိုးအစားကို …
မရှောင်ရင် ကိုယ့်ကို ချစ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး
အသည်းဒွေ ခွဲသွားမှာ ကြောက်ရို့ …..
အန်တီရေ…မျှော်နေတာပါ… (၄) ကို အရင်ဖတ်မိပြီး (၃) ကို အခုမှ ဖတ်လိုက်တာပါ… (၄) ကိုဖတ်တုန်းကလည်း ကိုယ့်လက်ကို ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်…
အခု (၃) ကိုဖတ်တော့ လန့်သွားတယ်.. နောက်မှ စကားပြောရုံနဲ့ သွားဖုံးပေါ်တာဆိုတော့မှပဲ တော်ပါသေးရဲ့ လို့….
တကယ်ကို ဗဟုသုတရလို့ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်လို့…
အားပေးနေတာသိရလို့ ဝမ်းသာမိတာအမှန်ပါလို့ ပြောပြလိုက်ပါရစေ။။
မှန်တယ် ဗျ …
သာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သွားဖုံးပေါ်အောင် တော်တော်ကိုလုပ်ပြီး ရယ်ရမှာ..
အနှီ မိန်းကလေးတွေကတော့ …
ပြောတဲ့ပုံစံက တကယ့်ကို ထပ်တူထပ်မျှပါ။